Luz-Bhengeza ukukholelwa kwakho kuThixo-Ukubuyela eBukumkanini
ISt	NguLuz de Maria de Bonilla nge-3 kaJulayi, 2021:
Bantu abathandekayo bakaThixo, ndiyanisikelela; hlala uthembekile kwiintliziyo ezingcwele, ucele isipho sothando. Bhengeza ubukhulu boKumkani wethu kunye neNkosi uYesu Krestu, nimnqule, lihloniphe igama lakhe-nokuba abo bakungqongileyo abakholelwa, musa ukoyika ukuvakalisa ukholo lwakho kuThixo, abathathu ku-Mnye. Umanyano lwabantu bakaThixo lubalulekile ngeli xesha, ngakumbi kunamanye amaxesha, ngenxa yokwamkelwa eCaweni kwayo yonke into yobuhedeni, ngezi ndlela zala maxesha zigqwetha umantyi oyinyaniso endaweni yezenzo ezihlazo. Yinyani, yibani ngabantu abangayamkeliyo le mihla, nibe ngabathandi begazi elingcwele likaKumkani wethu kunye neNkosi uYesu Krestu, nisazi ukuba aninakoyika nto, kuba nikhuselwe yimikhosi yam yasezulwini. Kufuneka uthandaze ngentliziyo yakho. Kuya kufuneka uthandazele ukuguquka kwakho kunye nokwabantakwenu noodade wenu ukuze baphume ebumnyameni apho bahlala khona. Baninzi kakhulu amangcwaba amhlophe avela kukusilela ukusilela, ngenxa ye "ego" yabo ebathintelayo ekwenzeni okuhle! Baninzi ke abachitha iintsuku zabo bengayekanga ukucamngca ngezinto abaza kuzifumana ngexesha lesilumkiso Funda malunga nesilumkiso… ukungathobeli kwaye bengakhange bathathe isigqibo sokuhlengahlengisa ubomi babo balungele okuhle! Baninzi kakhulu amangcwaba amhlophe - abanyanzelekileyo, abafuna ngenkani, ukuzonwabisa ngobuqaqawuli babo, bezijonga ngokwabo! Bantu beNkosi yethu kunye neNkosi uYesu Krestu, uMhlaba uyagungqiswa ngamandla; Kuya kufuneka ugcine izibonelelo zezinto eziyimfuneko ukuze usinde- hayi kuphela ukusinda kwakho kunye nosapho lwakho, kodwa nokwabantakwenu noodadewenu. Gcina ubusi: oku kutya kuluncedo. Kwangelo xesha linye gcinani into enokwenzeka kuye ngamnye wenu. Ukuhlanjululwa kobuntu kuyaqhubeka. Iziganeko ezinkulu ziya kuza ngenxa yamanzi, umoya, iintaba-mlilo, nokunye okuninzi okuveliswa ngumntu ngokwakhe. Indlala iya kusasazeka ezintlangeni Funda ngendlala yehlabathi…. Ilanga liza kuqhubeka ukuthumela iziphumo zalo eMhlabeni, nto leyo eya kubangela ukuba abantu baphinde babuye.
Umthandazo weRosari eNgcwele ubalulekile: UKumkanikazi noMama wethu umamela abo bawuthandaza ngentliziyo.
Bantu bakaThixo, thandazani malunga neziphumo ebezingalindelwanga nezonakalisayo zendalo eMhlabeni.
Bantu bakaThixo, thandazani ukuba ukwazi ngalo mzuzu ubalulekileyo kuya kukhula phakathi kwabantwana bakaThixo.
Bantu bakaThixo, thandazani: iFrance izakuva ubunzima. I-United States, i-Indonesia, iCosta Rica, iColombia kunye neBolivia ziya kugungqiswa kakhulu.
Bantu bakaThixo, thandazani: ICawe iyakwamkela ukwenziwa kwezinto. UKumkani wethu kunye neNkosi yethu uYesu Krestu bayopha, uKumkanikazi wethu uyalila.
Bantu bakaThixo, niyakujonga esibhakabhakeni nimangaliswe niyakudanduluka iGama likaThixo, abaThathu kuBanye…
Thandaza, yenza imbuyiselo, thanda uThixo, abathathu kwiNye; thembeka, ngaphandle kokuyifihla inkolo oya kuyithetha
UKumkanikazi noMama wethu bakuthwala ngeNtliziyo yakhe. Inkosi yethu kunye neNkosi yethu uYesu Krestu amagama akho abhalwe entliziyweni yakhe ngeGazi lakhe eliNgcwele. Fumana uxolo, iintsikelelo.
Bazalwane noodade, umthandazo kukunxibelelana noBathathu Emnye Ongcwele, noMama wethu. Umthandazo ngentliziyo usikhokelela ekubeni sazi ukuba singena kubudlelwane obukhula buqina ngalo lonke ixesha, kwaye isinika isiqinisekiso sokuba siphila emhlabeni, kodwa asingabo abasehlabathini. Masiyonwabele imithandazo esiyibizelwe yiZulu ngokwalo kwaye ngale ndlela, ngokumanyeneyo, abantu bakaThixo bayaviwa. (Khuphela incwadi yomthandazoUSt. Michael usazisa ngothotho lweziganeko ukuze sigcine indlela yezi ziganeko, kwaye usibizela ukuba sigcine ukutya okungonakaliyo njengoko ngamnye wethu enako. Masingakulibali oku, masingakubekeli amangomso kude kube ngomso. Bazalwane noodade, singabafundi nabapostile bakaKrestu: kufuneka siqine elukholweni, singazifihli kodwa sikuvume.
Funda malunga nesilumkiso…
Funda ngendlala yehlabathi…
← UGisella -Lungiselela ngokungathí sina
IValeria-Ilizwe lifanelekile… →